MSSP သည် MAXONIC Group နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲကုမ္ပဏီများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အသိဉာဏ်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် အသုံးပြုသူများနှင့် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအတွက် အချိန်မီ၊ ပွင့်လင်းပြီး တိကျသော ထုတ်ကုန်အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ မိုဘိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါသည်။၎င်းသည် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အဓိကထား၍ ပြည့်စုံသော အသိဉာဏ်ရှိသော စီမံခန့်ခွဲမှု ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် ထုတ်ကုန်များ၊ သုံးစွဲသူများ၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်ပေးသော ကြိုးဖြစ်သည်။
◆ MSSP ၏ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ
1. ဘဝစက်ဝိုင်း ထုတ်ကုန် အချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှု
ထုတ်ကုန်ကုဒ်၊ အင်္ဂါရပ်၊ ကန့်သတ်ချက်၊ ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲ၊ စက်ရုံဟောင်းရက်စွဲ၊ ပေးပို့မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဖောက်သည်အချက်အလက်၊ ပရောဂျက်အချက်အလက်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအချက်အလက်၊ ချွတ်ယွင်းချက်အချက်အလက်၊ တပ်ဆင်မှုနှင့် အမှားပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် စသည်ဖြင့်။
2. မိုဘိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု
စာချုပ်ထိန်းသိမ်းခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ လှည့်ကင်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဝန်ထမ်းနေရာချထားခြင်းနှင့် စေလွှတ်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ခြေရာခံခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုရလဒ်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း စီမံခန့်ခွဲမှု၊ သဘောထားနှင့် အကြံပြုချက် စသည်တို့။
ဓာတ်ငွေ့ detector, မီးလောင်နိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ အချက်ပေး, ပုံသေဓာတ်ငွေ့ detector, lpg ဓာတ်ငွေ့ detector, မီးလောင်လွယ်သောဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်, တရုတ်ဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်း,